Varimi veChuvashia vachadzoserwa mari yekutenga michina yekugadzirisa yakadzika matapiri nemiriwo - "Potato System" magazini
Varimi veChuvashia vachabhadharwa pakutenga michina yekugadzirisa kwakadzama mbatatisi nemiriwo
в State, Kudzokorora
Chuvashia ichadzorera makumi matatu kubva muzana emutengo wekutenga michina yekumhanyisa kugadzira mukaka, nyama, mbatatisi uye miriwo. Iyi sarudzo yaitwa nhasi pamusangano wenguva dzose weKabineti yeMakurukota.
Sekureva kweMutevedzeri wegurukota rezvekurima weChuvash Republic Alina Semenova, shanduko dziri kuitwa kumitemo yekupa rubatsiro kubva kubhajeti republican kuti dzosere chikamu chemitengo yehunyanzvi uye tekinoroji kugadziridza kwekurima, izvo zvinopa kuwedzera kwe runyorwa rwemuchina wakapihwa michina nemidziyo yekumhanyisa kumhanya kwekuvandudzwa kwemuchina uye matirakita ngarava nezvinhu zvisere.
"Zvakare, kutsigira kuvandudzwa kwemasangano anogadzira zvekurima, zvinofungidzirwa kudzosera makumi matatu muzana emitengo yekutenga michina yehunyanzvi yekugadzirisa mukaka, nyama, michero nemiriwo nembatatisi," akadaro Alina Vitalievna.
Sekureva kweMutevedzeri wegurukota, kudzoreredzwa kwemitengo yekutengwa kwemidziyo nhasi ndeimwe yematanho anodikanwa ekutsigirwa nenyika. Muna 2020, varimi 163 vekurima vakashandisa mukana wekusimudza michina yavo pachiyero chakasarudzika, izvo zvakaita kuti zvikwanise kuwedzera simba muChuvash Republic zvachose kusvika pa 118 hp. pahekita zana.
Tichifunga nezve shanduko dzakatarwa, varimi vanopfuura zana nemakumi mana vezvekurima vachakwanisa kuwana rutsigiro rwehurumende muna 2021. Bhajeti reRepublic rinopa izvi zvemamirioni mazana mashanu nemakumi masere neshanu.
Tags: kuvandudzwa kwekugadziriswaRepublic of ChuvashiaSubsidies
Mazuva masere asara pamberi pemusangano "ProStarch: Trends muMusika weAdvanced Grain Processing"